समाचार समाचार अपडेट - Page 231 of 295 - कोसी अनलाइन | Koshi Online
‘सारेगमपा लिटिल च्याम्प्स्’को फाइनलमा आयुष र प्रितम
मङ्गलबार, २१ जेठ, २०७६
विराटनगर, नेपाली दुई बाल प्रतिभा भारतीय टिभी जिटिभीमा प्रसारण भइरहेको गायन रियलाटिली शो ‘सारेगम लिटिल च्याम्प्स्’को फाइनलमा पुगेका छन् । उक्त चर्चित गायन रियालिटी शो ‘सारेगमपा लिटल च्याम्प्स’ को २०१९
कोइराला निवासको सुरक्षामा नगर प्रहरी
विराटनगर, संघीय सरकारले विराटनगरस्थित कोइराला निवासको सुरक्षाका लागि खटिएको सशत्र प्रहरी फिर्ता बोलाएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले नगरप्रहरी खटाएको छ । सशत्र प्रहरी फिर्ता भएको पाँच दिनपछि मंगलबारबाट
जलवायु परिवर्तनको असर : भारतको चुरुको तापक्रम ५० डिग्री माथि
चुरु, भारत । जलवायू परिवर्तका कारण भारतको राजस्थान प्रदेशमा रहेको चुरु सहरको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सीयस भन्दा माथी पुगेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार चुरु भन्ने स्थानको तापक्रमा ५०.८ डिग्री सेल्
रंगाशालाको बार भत्काउने १४ जना छुटे, प्रकाश कँडेलसहित ३ जना हिरासतमै
चितवन । चितवनको रामपुरमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय रङ्गशालामा लगाइएको अस्थाई बार डोजर लगाएर भत्काएको आरोपमा पक्राउ परेका १४ जनालाई प्रहरीले छोडेको छ । उनीहरुलाई हाजिरी जमानीमा आवश्यकत
कस्ताे अवस्थामा रक्तदान गर्न मिल्दैन ?
हामीले दिएको रगतबाट कसैले जीवन पाउँछ । रक्तदान जीवनदान भन्दै हामीले धेरै सुनेका पनि छौं । सबै मानिसहरु रक्तदान गर्न सक्ने हुदैनन् । हामीले कस्तो अवस्थामा रक्तदान गर्न सक्छौं भनेर जानकारी लिन जरुरी छ ।
गम्भिर दुर्घटनापछि श्रीमतीलाई भिडियो कल….
विराटनगर । यात्राका क्रममा दुर्घटना भए हामी तत्काल उपचारकालागि अस्पताल जान्छौ । उपचार बाहेक अन्य विषयमा ध्यान हुँदैन् । तर सुन्दा अचम्म लाग्ने घटना भारतमा भएको छ । फिल्मको कहानीमा जस्तै एक व्यक्ति दुर
राणा साशन फालेको कोइराला निवासको गेटमा ताला
विराटनगर । सरकारले दुई दशक यता सुरक्षा दिदै आएको घरबाट प्रहरी फिर्ता बोलाएपछि विराटनगर स्थीत कोइराला निवासमा ताला लागेको छ । नेपालमा भएको राजनीतिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कोइराला निवासबाट
महासचिवको मध्यस्थतामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डवीच छलफल
काठमाण्डौँ । एकअर्काबीच असझदारी बढिरहेको बेला सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डले पार्टी एकताको बेला भएको भित्री सहम
मैत्रिपूर्ण खेलमा मलेसियासँग नेपाल पराजित
विराटनगर । मलेसिया विरुद्धको मैत्रिपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । आइतबार राति भएको खेलमा नेपाल २–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । विश्वकप फुटबलको छनोट चरणको तयारीकालागि नेपालले मलेसियाविरुद्ध अन्त
पिपुल्स च्वाइस अवार्डकालागि पाँच खेलाडी मनोनयनमा, तपाइको भोट कसलाई ?
काठमाडौं । पल्सर स्पोर्टस अवार्ड २०७५ को पिपुल्स च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा पाँच खेलाडी परेका छन् । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारीसहित पाँच अलग अलग खेलका खेलाडी पिपुल्स च्वाइस अ
सांसद बस्ने कुर्सी भाँचियो
काठमाडौं । प्रतिनिधी सभा भवन मर्मतकालागि सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ । राज्यको ठूलो धनराशी खर्च गरेर मर्मत गरेको संसद भवनको कुर्सी भाच्चिएका कारणा असुरक्षित बनेको सत्तारुढ संसदले गुनासो गरेका छन् । सत्
नेपाल र मलेसिया भिड्दै, नेपालको सम्भावना कति ?
विराटनगर । नेपालले आज मलेसियासँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्दैछ । मैत्रिपूर्ण खेलकालागि मलेसिया पुगेको नेपाली टोलीले साँझ ७ः४५ बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फिफा विश्वकपक छनोटको दोस्रो चरण
विराटनगर । विश्व चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको अध्यक्षमा पून मार्क जुकर्बर्ग चयन भएका छन् । फेसबुकबाट प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी भएपछि आलोचना समेत खेपेका कार्यकारी अधिकृत मार्क पून अध्यक्षमा निर्वाचित
शनिबार रातिदेखि वर्षा, सोमबार सम्म मौसम खराब रहने
विराटनगर । शनिबार मध्यरातदेखि विराटनगर सहित पूर्व क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ । पश्चिमा वायुमा आएको प्रभावका कारण पूर्व क्षेत्र सहित देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको हाे । मौसम पूर्वानुमान महाशाखले
दरबार हत्याकाण्ड भएकाे १८ वर्ष पूरा, अझै खुलेन राजा विरेन्द्र शाहकाे वंशनाशको रहस्य
विराटनगर । नेपालका तत्कालिन राजा विरेन्द्र विरविक्रम शाहको परिवारको वंशनाश भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । २०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रवार राति नारायणहिटी दरबारमा राजा विरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी हत्याकाण्ड भए
विराटनगर, युरोपकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगको उपाधि इंग्लिस क्लब लिभरपुलले उचालेको छ । शनिवार राति भएको फाइनल खेलमा लिभरपुलले टोटनह्याम हटस्परलाई २–० गोलले हराउँदै उपाधि उचालेक
त्रिवी अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण, भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्यो
काठमाडौं । कलेजको प्रत्यारोपणकालागि भारत जानुपर्ने समस्याको सामधान हुने भएको छ । त्रिभुवन विश्विद्यालय शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जले गरेको कलेजो सफल प्रत्यारोपण गरेपछि भारत जानुपर्ने समस्या सामधान भएको ह
कार दुर्घटनामा रियल मड्रिडका पूर्व खेलाडीको मृत्यु
एजेन्सी । रियल मड्रिडका पूर्व खेलाडी जोसे एन्टोनियो रेयसको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय एक्स्ट्रेमा डुरा युनाइडेडबाट खेल्दै आएका ३६ वर्षिय मिड फिल्डर जोसेको शनिवार भएको कार दुर्घटन
मोरङ व्यापार संघको विवाद पुग्यो जिल्ला प्रशासनसम्म
विराटनगर । एक पक्षीय रुपमा निर्वाचन परिणाम आफ्नो तिर पार्न नियतवश मतदाताको पुर्ण विबरण उल्लेख नगरी नामावली प्रकाशन गरिएपछि मोरङ व्यापार संघको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेको छ । &nb
च्याम्पियन्स लिग फाइनल : लिभरपुल र टोटनह्याम भिड्दै, टोटनह्यामलाई इतिहास रच्ने अवसर
एजेन्सी । युरोयिन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिकालागि आज लिभरपुल र टोटनह्याम भिड्दैछन् । युरोपको सार्बधिक चर्चित र ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल नेपाली समय अनुसार शनिवार राति १२ः४५ मा
यार्सा टिप्न गएका ५ को मृत्यु
डोल्पा । यो वर्ष यार्सागुम्बा टिप्ने क्रममा डोल्पामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । गत विहिबार यता लगातार प्रत्येक दिन एक एक जनाको मृत्यु भएसंगै यो वर्ष मृत्यु हनेको संख्या ५ पुगेको हो । विहिबारयता दुई जनाको
विराटनगर । सनिबारदेखि ३ दिनसम्म देशभर वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । मौसम पुर्वानुमान महाशाखका अनुसार तीन दिनसम्म देशैभर आंशिकदेखि हल्का र मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । तीन दिनसम्मको मौसम पुर
भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । दुई दिने भारत भ्रमण पुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहिबार भारतको राजधा
मोरङ व्यापार संघमा चुनावी चटारो, सर्वसम्मत हुने सम्भावना न्यून
विराटनगर । मोरङ व्यापार संघको चुनाव नजिकिदै जाँदा चहलपहल बढेको छ । व्यापार संघको निर्वाचन समितिले आगामी २४ गतेलाई मतदान र २० गते उमेद्वारी दर्ताको मिति तोकेको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार यस पटक प्र
मौसम : आज हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, पश्चिमी वायुको प्रभावले देरभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पूर्वी र मध्य भागका केही स्थान तथा पश्चिमी पहाडी भेगका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना देखिएको छ ।
क्लब छाड्ने हल्ला चलेपछि रामोसको प्रतिक्रिया ‘ रियलबाटै सन्यास लिन्छु ’
एजेन्सी । रियल मड्रिडका कप्तान सर्जियो रामोसले रियल मड्रिड नछाड्ने बताएका छन् । रियल मड्रिड छाड्न लागेको हल्ला चलेपछि पत्रकार सम्मेलन गरी उनले क्लबमै रहने बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा रियल मड्रिडको
बुवाले थालेको ‘क्रान्ति’मा विप्लवका छोरा प्रकाशको साथ
केही समययता नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उक्त समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सो पार्टीका अधिकांश नेता अचेल लगभग भूमिगत रहेका
इदुल फित्रको विदा जेठ २३ मा
काठमाण्डौँ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको महत्वपूर्ण पर्व इदुल फित्रको दिन सार्वजनिक विदा दिने संघीय सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता त
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशने निर्माण गर्ने रंगशालाको काम रोकियो
चितवन, अराजक समुहले टिनको बार भत्काएपछि चितवनको भरतपुरमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको अुगाईमा निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम रोकिएको छ । बुधवार स्थानीय नेत
युरोपा लिगकाे फाइनलमा हाजार्डको दुई गोल, चेल्सी छाडेर रियल मड्रिड जाने सम्भावना कती ?
एजेन्सी । बुधवार राति युरोपा लिगको फाइनलमा आर्सनललाई पराजित गर्दै चेल्सीले उपाधि उचाल्दा नायक बने इडेन हाजार्ड । बुधबार राति भएको उपाधि भिडन्तमा लण्डन क्लब आर्सनललाई ४–१ गोल अन्तरले हराउँदै चेल्सीले उ
मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन ओली भारत जाँदै
काठमाडौं । दोस्रो कार्यकालकालागि निर्वाचित भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली भारत जाने भएका छन् । भारतीय लोकसभा चुनावमा भारी मत सहित वि
प्रहरीको मोटरसाइकल चाेरी गरि भाग्दै गर्दा जाममा परेपछि….
विराटनगर । प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङ अगाडिबाट चोरी भएको मोटरसाइकलसहित बुधबार एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका
एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्रीले भने ‘नेपाल डिजिटल युगमा अघि बढ्यो’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल डिजिटल युगतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा आज तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सनरुम) को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताए
इन्धनमा थपियो १ रुपैयाँ कर
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने कर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कर बढेको बताएका हुन् । आगामी आथिक वर्षबाट लागु हुनेगरी स
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ कालागि सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको छ । सरकारले आागमी आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी पाउने स्केलबाट २० प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले संघीय सांसदहरुकालागि निर्वाचिन क्षेत्र विकासकालागि ६ करोड दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक
हवाइ क्षेत्रकाे विकासकालागि १५ अर्ब ८५ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष हवाइ क्षेत्रको विकासकालागि १५ हर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विमानस्थलको स्तरउन्नतीकालागि १८ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटबाट पोखरा
जनता आवास कार्यक्रम : ३० हजार घर बनाउन ४ अर्ब ३० करोड
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० हजार विपन्न परिवारकालागि आवास निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रम मार्फत अाथिक वर्ष २०७६–७७ भित्र ३० हजार घर बनाउन ४ अर्ब ३० करोड विनियोज
यातायात पूर्वाधारकालागि डेढ खर्ब बजेट
काठमाडौं । सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष यातायात क्षेत्रको विकास र विस्तारकालागि एक खर्ब ६३ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधवार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले रे
सबै स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको विकासकालागि सरकारले एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना कृषि प्राविधिक राखिने भएको छ । सरकारले बजेट भाषणका क्रममा कम्तिमा एक जना प्राविधिक राख्ने योजना अघि सारेको हो । त्यस्तै
आज लाेकप्रिय बजेट आउँदै , कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढ्ने !
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ कोे बजेट संघिय सरकारले आज सङ्घीय संसदमा पेश गर्दैछ । बुधवार दिउँसो ४ बजे बस्ने संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट
लाेकसेवा आयाेगले नाै हजार कर्मचारी माग्याे
काठमाडौं । मुलुक संघिय संरचनामा गएपछि लोकसेवा आयोगले पहिलाे पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । स्थानीय तहका लागि आयोगले बुधबार नौ हजार एक सय भन्दाबढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान ग
मोदीलाई भेट्दै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्विपक्षीय छलफल गर्ने भएका छन् । राजधानी काठमाडौँमा मंगलबार आयोज
काठमाडौँ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गको ९३ दशमलव ६ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा बर्दिवास–निजगढ रेलमार्गको
पन्ध्र सय दिनपछि तातोपानी नाका खुल्दै, नाका खुल्ने खबरसँगै व्यापारी-व्यवसायी चहलपहल बढ्यो
काठमाडौं, अन्ततः लामो प्रतीक्षापछि चीनसँगको व्यापार नाका बुधबारदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । भैँचालोले भत्काएका भौतिक संरचनाको दुवै देशले निर्माण गरेपछि एक हजार ४९५ दिनपछि नाका सञ्चालनमा आउन लागेको हो ।
कमजोर अवस्थामा क्रिस्टियानो रोनाल्डो
एजेन्सी । चर्चित फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छाडेर युभेन्टस पुग्दा उनका प्रशंसकले उत्कृष्ठ प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा राखेका थिए । युभेन्टसको पहिलो सिजनकाे अन्त्य सम्मको अवस्थामा रोना
ह्यारी केन फिट, च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल्ने !
एजेन्सी । चोटका कारण लामाे समय मैदान बाहिर रहेका टोटनह्यामका फरवार्ड ह्यारी केन फिट भएका छन । म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको अन्तिम अाठकाे खेलमा घाइते भएका उनी फिट भएका हुन । लामाे समय चाेटका कारण मैदा